Afarta Ciyaarood Ee Uu Hoggaamin Doono Real Madrid, Sida Uu Ku Noqon Karo Tababare Buuxa Iyo Qodob Sharci Oo Soo Koobaya Waqtigiisa – Cadalool.com
Afarta Ciyaarood Ee Uu Hoggaamin Doono Real Madrid, Sida Uu Ku Noqon Karo Tababare Buuxa Iyo Qodob Sharci Oo Soo Koobaya Waqtigiisa
Real Madrid ayaa tababare ku-meelgaadh ah u magacowday Santiago Solari oo beddeli doona Julen Lopetegui oo xalay shaqada laga eryey kaddib guul darrooyin iyo natiijooyin aan la aqbali karin oo Los Blancos u dejiyey kaalinta sagaalaad ee horyaalka LaLiga.
Solari oo ahaa tababaraha kooxda da’yarta Real Madrid ayaa uu madaxweyne Florentino Perez go’aansaday in si ku meelgaadh ah xilka uu u qabto oo hal caqabad ah ay ka hor istaagayso in si degdeg ah loogu magacaabo tababaraha rasmiga ah.
Afar ciyaarood ayaa uu Solari hoggaamin doonaa Real Madrid isaga oo ku-meelgaadh ah, waana kulamo muhiim ah oo guul ay ka gaadhaan ay go’aamin doonto halka ay suurtogalka tahay in xili ciyaareedkan ay kaga dhamaystaan horyaalka LaLiga, Cope del Rey iyo Champions League oo ay iskugu jiraan kulamadani.
Kulanka ugu soo horreeye waxay Real Madrid la ciyaari doontaa habeen dambe kooxda yar ee Melila waana ciyaar ka tirsan Copa del Rey oo ka dhici doonta qaaradda Afrika, jasiirad ku taalla duleedka dalka Morocco oo Spain ay haysato. Ciyaarta labaad, waxay Sabtida soo socota iska hor imann doonaan Valladolid ka hor inta aanay Viktoria Plzen tartanka Champions League isku haleelin Arbacada toddobaadka dambe. Kulanka afraad waxa uu noqon doonaa Celta Vigo oo 11 November ay ku ballansan yihiin ciyaar horyaalka ah.
Afartan kulan ee laba toddobaad gudahood dhacaya marka ay dhamaadaan waxa uu Solari booska u bannayn doonaa tababare cusub oo la magacaabi doono, ama isaga ayaa si rasmi ah loogu cumaamadi doonaa xilka sidii Zinedine Zidane oo kale.
Qodobka Sharci ee labada toddobaad
Sharciga ciyaaraha dalka Spain ee RFFF ayaa waxa uu xadidayaa muddada uu tababare si kumeelgaadh ah u hoggaamin karo koox xili uu socdo horyaalka caadiga ah ee xili ciyaareedku.
Qodobka 60 oo ka hadlay tababareyaasha iyo liisamadooda, ayaa waxa uu dhigayaa in kooxna aanay tababare ku-meelgaadh ah haysan karin wax ka badan laba toddobaad, waxaana ay taasi soo dedejinaysaa laba kala doorasho oo ah in Solari loo magacaabo tababare buuxa iyo in macallin cusub lagu dhawaaqo.